वजन - धेरै आधुनिक मान्छे को समस्या। उहाँले विश्वको जनसंख्याको दस प्रतिशत अवलोकन। अतिरिक्त किलो को कारण गलत जीवनशैली, ज्यादा, बंशाणु, रोगहरु को एक नम्बर मा झूठ। विशेषज्ञहरु कि मोटोपना भन्न - यो सिर्फ कस्मेटिक दोष, तर पनि मानव स्वास्थ्य गम्भीर खतरा छैन। अक्सर, यो समस्या जीवनको गुणस्तर क्षीण र मृत्यु को लागि नेतृत्व गर्न सक्ने रोगहरु बढी गम्भीर कारण बन्दछ। यो मानिसहरूको शक्ति गुणस्तर र शारीरिक गतिविधि को विशेष महत्व ध्यान केन्द्रित गर्न स्वास्थ्य पेशेवरों बनाउँछ।
केही हप्ता अघि अस्ताना मा वैज्ञानिकहरूले र nutritionists एक सम्मेलन आयोजित। विशेषज्ञहरु काजाकिस्तान नागरिक को बहुमत वजन भएको छ भन्दै, चासो व्यक्त गर्नुभएको थियो। विशेषज्ञहरु कडा मेनु परिवर्तन गर्न र खाना आफ्नो मनोवृत्ति पुनर्विचार गर्न, साथै खेल गर्न Resort गर्न आहार योजना ध्यान, Kazakhstanis थप गर्न सुझाव दिन्छौं। नागरिक मृत्युको पाँचौं अग्रणी कारण बन्ने गणतन्त्र मोटोपना को क्षेत्रमा चिकित्सकहरु को तथ्याङ्क अनुसार। आज काजाकिस्तान यी र अन्य समाचार विभिन्न स्रोतबाट प्रकाशित छन्। अन्वेषण गर्न सबैभन्दा सुविधाजनक तरिका - सम्बन्धित साइटहरु हेर्नुहोस्। यहाँ, सबै समाचार फोटो, विशेषज्ञ टिप्पणी र सामान्य प्रयोगकर्ता द्वारा पूरक, नियमित अपडेट छन्।
अतिरिक्त वजन को समस्या फर्केपछि यो पोषण को काजाकिस्तान एकेडेमी को राष्ट्रपति, आफ्नो शरीर गर्न विस्तृत वर्णन अपर्याप्त ध्यान को नतिजा कि टिप्पण लायक छ। Toregeldy Sharmanov तर्क छ कि मोटोपना - हृदय pathologies विकास गर्न एक सीधा सडक। बोसो मान्छे उच्च रक्तचाप, हृदय आक्रमण ग्रस्त र स्ट्रोक उजागर छन्। साथै, अतिरिक्त वजन अन्तस्करणले मा पत्थर र बालुवा गर्न जान्छ।
काजाकिस्तान पावर को क्षेत्र मा काम व्यवसायी, स्थानीय नागरिक यो समस्या धेरै महत्त्व संलग्न छैन भनेर उल्लेख गरे। देश को क्षेत्र मा पर्याप्त खाना पंथ विकास गरिएको छ। एक हार्दिक नाश्ता, भोजन र खाने को लागि एक विशेष fondness scarcity एक युग मार्फत बस्ने गरेका हुन्। सबै को सबै भन्दा, विशेषज्ञहरु जवान मान्छे मा मोटोपना तथ्याङ्क बारेमा चिन्तित हुनुहुन्छ। तिनीहरूले यो अवस्था छिटो खाना र अन्य हानिकारक खाना गर्न युवा लत कारण थियो भन्ने कुरामा विश्वस्त छन्।
Galina Timchenko: को पत्रकार को बाटो
"Ballmer शिखर": भ्रम वा वास्तविकता? प्रोग्रामर किन मन रात मा काम गर्न? स्टीव Ballmer
फोटो संग व्यञ्जनहरु: लागि Pies लीन भर्ने
गल्फ हेर्नुहोस्3* (ग्रीस / रोड्स) फोटो, मूल्यहरु र रूस देखि पर्यटकहरु को समीक्षा
'Ginokomfort' हो। समीक्षा, वर्णन, सङ्केत गर्छ
इगोर Kapranov - रक स्टार बढ्दो
व्यापार जोखिम मुख्यतया जिम्मेवार छ